Ukunquma Ikhamera Efanele Yomzimba-Worn | Izixazululo ze-OMG
Ukunquma Ikhamera Efanele Yomzimba-Worn
Amakhamera agqokwa ngomzimba ngamakhamera akhethekile axhumene nomzimba womuntu. Lawa makhamera ahlinzeka ngesipele nokusekelwa kumsebenzisi ngokuqopha konke abhekana nakho.Amakhamera agqokwa ngabantu asebedumile eminyakeni ezayo futhi aseqale ukusetshenziswa kaningi. Manje ngosuku, singabona iningi lamaphoyisa asebenzisa amakhamera agqokwa ngomzimba. Singathola izinhlobo eziningi zamakhamera agqokwa ngomzimba emakethe kalula. Amakhamera agqokwa ngomzimba asetshenziswe kakhulu ngumnyango wamaphoyisa kepha asebenzisa nakwezinye izinto eziningi. Ake sibheke okunye kokusetshenziswa kwalamakhamera.
Ukusetshenziswa kwamakhamera agqokwa ngomzimba:
Ngokuvamile, amakhamera agqokwa ngomzimba asetshenziswa ngumnyango wamaphoyisa. Kubanikeza isipele nokusekelwa futhi kusiza ekuphenyweni nasekubhekisiseni kwabo. Kepha ngaphandle kwalokhu, amakhamera agqokwa ngomzimba anezinye izinto eziningi ezisetshenziswayo. Njengokuhlola, zingasetshenziswa ukurekhoda tutorials. Njengoba sazi, amakhamera agqokwa ngomzimba anamathiselwe emzimbeni ngakho-ke akhombisa zonke izinto umsebenzisi ahlangabezana nazo. Ngale ndlela, la makhamera angasetshenziswa ukuqopha tutorials kanye namakilasi ama-rookies. Singathatha isibonelo sesibhakela. Angasebenzisa amakhamera agqokwa ngomzimba ukunikeza ukuqopha bukhoma komdlalo okuhlangenwe nakho. Lokhu kwenza kube lula ukuthi abanye bafunde. Ngaphezu kwalokho, singasebenzisa futhi la makhamera ngesikhathi sokuhambisa bukhoma ukuze kufakwe imbozo.
Isizathu sokufaka ukusetshenziswa kwakungukutshela abafundi bethu ukuthi amakhamera agqokwa ngomzimba awasetshenziswa kuphela yizikhulu zomnyango wamaphoyisa. Inezinye izinhlelo eziningi eziningi. Lokhu kusinika izinhlobo eziningi zala makhamera asemakethe okwenza ukuthi kube nzima ngathi ukukhetha. Ngakho-ke, sizobe sikusiza ekukhetheni ikhamera egqoke kahle yomzimba ngokwakho.
Ungawakhetha kanjani amakhamera agqokwa kakhulu womzimba:
Kunezici ezithile eziyinhloko ezisitshela ukuthi sizikhethela ikhamera egqokwa ngomzimba efanele thina. Ekuqaleni, umsebenzisi kufanele azi inhloso athenge ngayo ikhamera egqoke umzimba. Uma esebenza emnyangweni wamaphoyisa, kuzofanela afise lezo zinhlobo zamakhamera. Uma ekufuna ukuqopha tutorials, khona-ke kufanele aye kolunye uhlobo lwekhamera. Zonke izakhiwo ezilandelayo zekhamera zincike enjongweni okhethwe kuyo ikhamera. Bese kuza ukuqina kwekhamera. Ikhamera egqoke umzimba kumele iqinise ukuqina. Kwamanye amathuba, ikhamera iwela phansi noma itholane nokuthile. Lokhu akufanele kulimaze izingxenye zekhamera. Ngemuva kwalokhu, isikhathi sebhethri kumele sibe silungile. Ikhwalithi yokuqopha kumele ibe yinhle. Into esemqoka okufanele igxile kuyo. Kuyisici esinganakwa kunoma yikuphi. Ngakho-ke, umphumela wokuqoshwa kwekhamera kufanele ube muhle. Kukhona ezinye izinto eziningi okufanele futhi zibhekwe. Masibe nemininingwane yalezi zinto.
Inhloso yokuthenga ikhamera:
Into yokuqala ebalulekile okufanele umuntu ayicabangele ngaphambi kokukhetha ikhamera egqoke kahle umzimba yinhloso ikhamera ethengwa kuyo. Inhloso enkulu esetshenziselwa amakhamera agqokwa ngomzimba emnyangweni wamaphoyisa. Iningi lamaphoyisa afakwe amakhamera agqokwa ngomzimba. Lawa makhamera ahluke kakhulu kwamanye amakhamera asemakethe. Njengoba la makhamera asetshenziselwa izinhloso zokubhekwa, kumele zakhiwe zigcina leyo njongo engqondweni. Amakhamera akhethekile enziwe kuqala ukukugcina lokho engqondweni. Lawa makhamera angasinika ukuqashelwa kobuso, ukukhonjwa kwe-biometric kanye nekhwalithi enhle yokurekhoda amanye amakhamera angenawo. Lokho kusitshela ukubaluleka kwenhloso ekukhetheni ikhamera egqoke umzimba.
Ukwenza uhlu lwezimpawu:
Le ngenye into ebalulekile okufanele uyenze ngaphambi kokuzikhethela ikhamera engcono kakhulu. Uma umuntu enazo zonke izici ezibhaliwe naye, khona-ke angakhetha idivaysi enhle yokusebenzisa kwakhe isikhathi esifushane kakhulu. Imakethe igcwele izinhlobo eziningi zemikhiqizo ezizodida ikhasimende. Noma ikhasimende linazo zonke izinto elizidingayo engqondweni yakhe, kepha lizodideka ngemuva kokuhamba ngemikhiqizo eminingi. Lokhu kuzomholela ekutheni azithengele umkhiqizo omubi futhi ongasebenzi kahle. Umkhiqizo kumele ube muhle emsebenzini kepha ngeke ulungele umsebenzisi. Ngakho-ke, kubalulekile ukwenza uhlu lwezicelo zakho. Lokhu kuzokuholela ukuthi uthenge idivaysi esebenza kahle futhi nayo ilungele umsebenzi wakho.
Ukushushuluza ku-inthanethi koMkhiqizo oyifunayo:
Futhi kuyinto ebaluleke kakhulu okufanele uyenze ngaphambi kokuthenga into enhle kakhulu emakethe. Amakhamera agqokwa ngomzimba abelokhu ethatha izitayela kule minyaka embalwa edlule. Iningi lezinkampani lifake amakhamera agqokwa ngomzimba kubaqaphi bawo bezokuphepha. Lokhu kwenziwe ngenxa yesilinganiso esandayo salawa makhamera. Izinkampani eziningi seziqalile ukwenza amakhamera azo agqokwa ngomzimba ukuzithengisa emakethe. Lokhu kuholele ezinhlotsheni eziningi zamakhamera agqokwa ngomzimba emakethe. Ngakho-ke, ngaphambi kokuya emakethe futhi athenge ikhamera egqoke kakhulu yomzimba, umuntu kufanele ayiseshe nge-inthanethi. Kufanele afunde izibuyekezo zabanye abasebenzisi ezizokwenza ukungabaza kwakhe ngomkhiqizo kucace.
Isikhathi Esifanele Sebhethri:
Kungenye into ebalulekile okufanele uyikhumbule ngaphambi kokuthenga amakhamera agqoke kakhulu omzimba. Isikhathi sebhethri kungenye yezinto ezibaluleke kakhulu zekhamera egqoke umzimba. Kumele isekele isikhathi esihle sebhethri sokuqoshwa isikhathi eside. Njengoba sazi, iningi lokusetshenziswa kwamakhamera agqokwa ngomzimba lingaphandle kwendlu yethu. Ukusetshenziswa kosuku lonke, ikhamera kufanele ibe nesikhathi esihle sebhethri esigcina ikhamera isebenza njalo futhi ingavumeli ukuba ife. Kufanele futhi ibe nokubuyiselwa okuyisisekelo kwebhethri okungathathelwa indawo nebhethri elifile ukwenza ikhamera isebenze isikhathi esithe xaxa. Sinesibonelo soMnyango wamaphoyisa. Endabeni yabo, badinga amakhamera athembekile wokusebenzisa usuku lonke. Amakhamera kufanele asebenze uma ngabe kwenzeka ukuqoshwa kophenyo noma okunye okurekhodiwe. Lokho kudinga ikhamera egqoke umzimba enesikhathi esihle sebhethri. Ngakho-ke, ekugcineni, uma ufuna ukuthi injongo yakho ifezeke ngokugcwele, lapho-ke kufanele ubhale isikhathi esihle sebhethri ohlwini lwakho.
Amanani abambe elikhulu iqhaza ekuthengeni imikhiqizo ehlukahlukene akha imakethe. Ngokuvamile abantu benze indinganiso. Bakholelwa ukuthi uma ufuna ukuba nomkhiqizo omuhle kakhulu, khona-ke kufanele ukhokhe intengo enhle yalowo mkhiqizo. Kepha lo mqondo awulungile. Uma usesha kahle imakethe ukuthola into enhle kakhulu, ungaba nayo umkhiqizo omuhle kakhulu ngentengo efinyelelekayo. Uma sesha imakethe, lapho-ke singathola amakhamera asebenzayo ahamba phambili ngentengo efinyelelekayo ye- $ 100- $ 150. Ikhamera egqoke kahle yomzimba kumele ibize ngasohlangothini lwamanani. Akumele kube umthwalo ephaketheni lakho.
Ikhwalithi enhle yokuqopha:
Amakhamera konke mayelana nokuqopha nokuthatha izithombe. Kunjalo nangamakhamera agqokwa ngomzimba. Ikhwalithi yokuqopha ingenye yezinto ezisemqoka zamakhamera agqokwa ngomzimba. Lawa makhamera kufanele aqophe konke nokwenzekayo phambi komsebenzisi. Lokhu kusitshela ikhamera. Kwehluleka kakhulu yinselelo enkulu ukuqopha ngenkathi kuhamba okuqhubekayo. Lokhu kuyinselelo kumakhamera. Abasebenzisi basesimweni sokuhamba okuqhubekayo lapho, ukuqopha kunzima kakhulu. Ividiyo eqoshiwe izofiphala kuleli cala. Ngakho-ke, uma sifuna ukukhetha ikhamera enhle kakhulu, khona-ke kufanele sibheke ikhwalithi yayo yokurekhoda ngenkathi siyihambisa.
Ubukhulu Nobunzima bekhamera:
Uma ufuna amakhamera agqokwa ngomzimba omuhle kakhulu emakethe kufanele ucabange ngalawo anosayizi omncane futhi alula. Isisindo sekhamera sibaluleke kakhulu sengathi umsebenzisi usinamathisela ekhanda, khona-ke lokho ngeke kumvumele ukuba ahambise ikhanda lakhe ngokukhululekile futhi kube yinkinga. Isayizi nayo ibalulekile njengoba ikhamera kufanele ibe mincane ngosayizi. Uma ikhamera inkulu ngosayizi kuzobukeka kukubi futhi kuzovezwa okuyi into embi. Ngakho-ke, ubukhulu nesisindo sekhamera kufanele kucatshangwe ngenkathi kuthengwa amakhamera agqoke kakhulu umzimba.
Isitoreji sendawo yekhamera:
Isitoreji futhi ngesinye sezici ezibaluleke kakhulu zamakhamera adinga ukunakekelwa. Ikhethekile uma kwenzeka kunamakhamera agqoke umzimba, asetshenziselwa ukuqopha amavidiyo aqhubekayo. Izokhishwa futhi ihluleke uma i-id yesitoreji igcwele ngesikhathi esifushane. Ngakho-ke, ngenkathi ukhetha ikhamera enhle kakhulu, umuntu kufanele akugcine lokhu engqondweni.
Ezinye Izici ikhamera efaneleke kakhulu yomzimba okufanele ube nazo:
Kunezinye izinto eziningi okufanele zigcinwe engqondweni ngenkathi ukhetha ikhamera egqokwa kakhulu yomzimba ngokwakho. Kumele ibe ne-engela ebanzi ukumboza isikhala esikhulu nendawo. Kufanele futhi ifake isici se-infrared ukuyenza iqophe ebusuku ngesikhathi sobumnyama. Kumele futhi ibe nokuqoshwa kwezwi futhi. Futhi, kumele ihlale isikhathi eside.
Ukunquma Ikhamera Efanele Yomzimba-Worn igcine ukuguqulwa: I-December 5th, i-2019 by admin
Ukubuka okuphelele kwe-3989 Ukubuka kwe-1 Namuhla